TOR 7 webhu bhurawuza ikozvino yavapo | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uine hanya nekuchengetedzwa kwemakomputa, zvirokwazvo vazhinji venyu munoziva nezve iyo Tor Network uye nematurusi ayo ekuchengetedza. Kune avo vasingazive netiweki iyi, iti inetiweki inoshanda seayai eiii uye inopa yakanyanya kusazivikanwa muhukama iyo inotibatsira kudzivirira malware uye spyware kuti isashande nedata redu.
Iyo TOR network ine maturusi akati wandei anoshandisa tekinoroji iyi, imwe yeiyi ndiyo TOR webhu browser. Iyi webhu bhurawuza yasvika yayo yechinomwe vhezheni, izvi ndizvo TOR 7 yatovepo.
Iyo itsva vhezheni yeTOR browser yakavakirwa paMozilla Firefox 52 ESR, yakagadzikana vhezheni ine rutsigiro rurefu. Asi izvi hazvireve kuti isu tinowana zvakafanana nezviri muFirefox, kure nazvo. TOR 7 inopa chengetedzo yakakura muzvinhu zvakaita sekutevera, malware kana chengetedzo pakati pevashandisi. Zvakare mune iyi vhezheni iyo sandbox yeFirefox inoiswa izvo zvinoita kuti zvimwe zvinoshandiswa zvive zvakachengeteka kuchengetedza kana macode ewebhu peji.
TOR network pamwe neMozilla Firefox 52 inoguma neTOR 7
TOR 7 yaendesa zvakare masokisi eFirefox kunongedza kuneti yeTOR, izvo zvinoita kuti zvive zvakachengeteka kushandisa, zvirinani maererano nekusazivikanwa. Kunyangwe isu tichifanira kutaura kuti aya maSandbox mashandiro uye kushandiswa kwemasokisi kuri kuva nedambudziko muWindows, asi ichagadziriswa nekuvandudzwa kweramangwana.
TOR 7 mukuwedzera inogadzirisa mabugs anga aine shanduro dzekare dzewebhu browser notupukanana twakaonekwa paMozilla Firefox uye idzo mushanduro dzakapfuura hadzina kugadziriswa. Izvo zvinoita kuti TOR 7 ive yakakodzera webhu bhurawuza kune vazhinji vashandisi. Vhura zvinyorwa zvekuburitsa shanduko dzese dzeshanduro dzinowanikwa zvakadzama.
Kana iwe uchida kuisa ino yewebhu browser mune yako Gnu / Linux kugovera isu tinongofanira kuenda kwa webhusaiti yepamutemo yeprojekti uye dhawunirodha pasuru yacho neiyo TOR mafaira e browser 7. Kana tangova nepakeji, tinoisunungura uye tinoita tinya kaviri pafaira «kutanga-tor-browser» kumhanyisa Tor Browser 7. Izvi zvichavhura webhu bhurawuza asi hazvingagadzike, chimwe chinhu icho parizvino chisina kugadziriswa nepakeji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » TOR 7 webhu bhurawuza ikozvino yavapo